Maamulka Hiiraan oo ku raad jooga macalin dugsi oo la sheegay inuu Kufsi ka geystay Beledweyne | allsaaxo online
Maamulka Hiiraan oo ku raad jooga macalin dugsi oo la sheegay inuu Kufsi ka geystay Beledweyne
Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa aad looga hadal hayaa kufsi ka dhacay magaalada oo loo geystay gabar sagaal sano jir ah, sida ay xaqiijiyeen dhaqaatiirta caafimaadka ee isbitaalka Beledweyne.
Dhacdadaan ayaa lagu waramayaa inay soo ifbaxday kadib markii la waayay gabadhii dhibaatada loo geystay, iyadoo markii la helay iyada oo dhiig baxeysa, waxaana la dhigay isbitaalka magaalada Beledweyne.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in macalin Dugsi Quraan uu ahaa ruuxa ka dambeeyay falka kufsiga ee loo geystay Gabadha sagaal jirka ah, waxaana la sheegay inuu ka baxsaday magaalada Beledweyne.
Guddoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Ibraahim Foodcadde oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay ku raad joogaan ruuxa falka kufsiga geystay.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay ku raad joogaan dhalinyaro caadeysatay inay toorey ku qalqal geliyaan amaanka magaalada Beledweyne xiliyada habeenkii.
“Waxaan ka warheynaa in kufsi uu ka dhacay xaafadda howlwadaag, ciidamada amaanka ayaa ku howlan ruuxii ka dambeeyay haddii lasoo qabtaana maxkamad ayaa lasoo saarayaa”ayuu yiri Guddoomiyaha gobolka Hiiraan.